1 Makoronike 21:1-30
21 Zvino Satani akamukira vaIsraeri, akakurudzira+ Dhavhidhi kuti averenge vaIsraeri. 2 Naizvozvo Dhavhidhi akati kuna Joabhi+ nokuvakuru vevanhu: “Endai munoverenga+ vaIsraeri kubvira kuBheeri-shebha+ kusvikira kuDhani,+ mudzoke kwandiri neshoko kuti ndizive kuwanda kwavo.”+ 3 Asi Joabhi akati: “Jehovha ngaawedzere vanhu vake kane zana kupfuura kuwanda kwavakaita.+ Haiwa ishe wangu mambo, vose zvavo havasi vashandi vashe wangu here? Ishe wangu anotsvakireiko izvi?+ Nei achida kuita kuti vaIsraeri vave nemhosva?” 4 Asi shoko ramambo+ rakakunda Joabhi, zvokuti Joabhi akaenda,+ akafamba nepakati pevaIsraeri vose, achibva azosvika kuJerusarema.+ 5 Zvino Joabhi akapa Dhavhidhi nhamba yevanhu vakanga vanyorwa; uye vaIsraeri vose vakasvika varume miriyoni imwe chete nezviuru zana vaivhomora bakatwa,+ vaJudha vakasvika varume zviuru mazana mana nezvine makumi manomwe vaivhomora bakatwa. 6 Asi haana kunyora+ vaRevhi+ nevaBhenjamini pakati pavo, nokuti shoko ramambo rakanga risina kufadza Joabhi zvachose. 7 Zvino chinhu ichi chakanga chakaipa kuna Mwari wechokwadi,+ naizvozvo akarova Israeri. 8 Naizvozvo Dhavhidhi akati kuna Mwari wechokwadi: “Ndatadza+ kwazvo zvandaita chinhu ichi. Zvino ndapota, bvisai kukanganisa kwomushumiri wenyu;+ nokuti ndakaita zvoupenzi kwazvo.”+ 9 Jehovha akataura naGadhi,+ muoni+ waDhavhidhi, achiti: 10 “Enda utaure naDhavhidhi, uchiti, ‘Zvanzi naJehovha: “Ndiri kukuunzira zvinhu zvitatu.+ Sarudza chimwe chete chazvo kuti ndikuitire ichocho.”’”+ 11 Naizvozvo Gadhi akapinda maiva naDhavhidhi+ akati kwaari: “Zvanzi naJehovha, ‘Sarudza chaunoda, 12 kuti kuve nenzara kwemakore matatu;+ kana kuti uparadzwe nemhandu dzako+ uye bakatwa revavengi vako rikuwane kwemwedzi mitatu, kana kuti kuve nebakatwa raJehovha,+ kana denda+ munyika, ngirozi yaJehovha ichiparadza+ munharaunda yose yevaIsraeri kwemazuva matatu.’ Zvino chiona zvandingapindura Iye andituma.” 13 Naizvozvo Dhavhidhi akati kuna Gadhi: “Zviri kunditambudza kwazvo. Ndapota, regai ndiwire hangu muruoko rwaJehovha,+ nokuti ngoni dzake izhinji kwazvo;+ asi musandirega ndichiwira muruoko rwomunhu.”+ 14 Jehovha akabva aunza denda+ pakati paIsraeri, zvokuti vanhu zviuru makumi manomwe vakafa pakati paIsraeri.+ 15 Mwari wechokwadi akatumawo ngirozi kuJerusarema kuti inoriparadza;+ uye payakangotanga kuparadza, Jehovha akazviona, akatanga kuzvidemba pamusoro pedambudziko racho;+ naizvozvo akati kungirozi yakanga ichiparadza: “Zvakwana!+ Chidzikisa ruoko rwako.” Ngirozi yaJehovha yakanga yakamira pedyo neburiro raOrinani+ muJebhusi.+ 16 Dhavhidhi paakatarira, akaona ngirozi yaJehovha+ yakamira pakati penyika nematenga, muruoko rwayo muine bakatwa rayo rakanga rakavhomorwa+ rakatambanudzirwa kuJerusarema; uye Dhavhidhi nevarume vakuru, vakapfeka masaga,+ vakabva vawira pasi nezviso zvavo.+ 17 Dhavhidhi akati kuna Mwari wechokwadi: “Handisi ini ndakati vanhu vaverengwe, uye handisi ini ndakatadza ndikaita zvakaipa here?+ Asi makwai aya,+ akaitei? Haiwa Jehovha Mwari wangu, ndapota, ruoko rwenyu ngaruuye pandiri neimba yababa vangu; asi kwete pavanhu venyu,+ kuti muvarove nedenda.” 18 Zvino ngirozi yaJehovha yakaudza Gadhi+ kuti anoudza Dhavhidhi kuti Dhavhidhi aende kunovakira Jehovha atari paburiro raOrinani muJebhusi.+ 19 Naizvozvo Dhavhidhi akaenda sezvakanga zvataurwa naGadhi achishandisa zita raJehovha.+ 20 Munguva iyi, Orinani+ akatendeuka, akaona ngirozi yacho; uye vanakomana vake vana vaaiva navo vakavanda. Zvino Orinani akanga achipura gorosi. 21 Naizvozvo Dhavhidhi akasvika paiva naOrinani. Orinani paakatarira akaona Dhavhidhi,+ akabva abuda muburiro, akakotamira Dhavhidhi chiso chake chakatarira pasi. 22 Dhavhidhi akabva ati kuna Orinani: “Ndipewo nzvimbo yeburiro, kuti ndivakire Jehovha atari ipapo. Nditengesere nemari+ yakakwana,+ kuti denda+ ribviswe pakati pevanhu.” 23 Asi Orinani akati kuna Dhavhidhi: “Ritorei henyu kuti rive renyu,+ uye ishe wangu mambo ngaaite zvakamunakira. Onai, ndiri kupa mombe+ kuti dzive zvinopiwa zvinopiswa nechirei chinoshandiswa kupura+ kuti chive huni+ negorosi kuti rive chinopiwa chezviyo. Ndiri kupa zvose.”+ 24 Asi Mambo Dhavhidhi akati kuna Orinani: “Aiwa, ndichatotenga nemari yakakwana,+ nokuti handingaendi nezvinhu zvako kuna Jehovha kuti ndinopa zvibayiro zvinopiswa zvandisina kutenga.” 25 Naizvozvo Dhavhidhi akapa Orinani mashekeri endarama aisvika mazana matanhatu nokuda kwenzvimbo yacho.+ 26 Dhavhidhi akabva avakira Jehovha atari+ ipapo, akapa zvibayiro zvinopiswa nezvibayiro zvokugoverana, akadana Jehovha,+ iye akamupindura nomoto+ wakabva kudenga ukaenda paatari yezvinopiwa zvinopiswa. 27 Jehovha akataurawo shoko kungirozi yacho,+ iyo yakabva yadzorera bakatwa rayo mumuhara waro. 28 Panguva iyoyo, Dhavhidhi paakaona kuti Jehovha akanga amupindura ari paburiro raOrinani muJebhusi, akaramba achibayira zvibayiro ipapo.+ 29 Asi panguva iyoyo tebhenekeri yaJehovha yakanga yagadzirwa naMosesi murenje neatari yezvinopiwa zvinopiswa, zvakanga zviri panzvimbo yakakwirira kuGibhiyoni.+ 30 Dhavhidhi akanga asina kukwanisa kuenda pamberi payo kuti anobvunza Mwari, nokuti akanga achitya+ bakatwa rengirozi yaJehovha.